Ogaden News Agency (ONA) – Somaligii Ugu Horeeyay oo Kamid Noqda Baarlamaanka Dalka Canada.
Somaligii Ugu Horeeyay oo Kamid Noqda Baarlamaanka Dalka Canada.
Posted by Dayr	/ October 21, 2015
Axmed Xuseen oo ah Soomaali Canadian ah ayaa noqday Soomaaligii ugu horeeyay ee noqda Mudane katirsan Baarlamaanka dalka Canada kadib markii uu helay 17,420 cod. Axmed ayaa ka sharaxnaa xaafadda York South-Weston, wuxuuna ka tirsan yahay Xisbiga Liberal-ka oo si aqlabiyad ah ugu guulaystay doorashada kadhacday dalka Canada.
Xisbiga Liberal-ka ayaa ka helay 186 kursi tirada guud ee Baarlamaanka Canada oo ah 338 kursi. Mike Sullivan oo katirsan xisbiga NDP iyo James Robinson oo ka socday xisbiga Conservative ayaa Axmed la tartamayay. Faysal Xasan iyo Cabdul Cabdi oo Soomaali Canadian ah oo ka sharaxnaa xisbiyada Conservative iyo NDP ayaa kuguul daraystay ineey kamid noqdaan Baarlamaanka dalka Canada.
Raysul wasaaraha dalka Canada Stephen Harper oo tan iyo 2006-dii hayay jagada ayaa laga guuleystay markii saddexaad oo uu xilkaasi u tartamo. Justin Trudeau hoggaamiyaha xisbiga Liberal-ka ayaa afarta sano ee soo socota noqon doono Reysul wasaaraha cusub ee dalka Canada.
Justin Trudeau waxyaabaha uu ballan qaaday xilligii ololaha doorashada uu kujiray waxaa kamid ah dhimista canshuurta, kordhinta lacagaha lasiiyo dadka howlgalbka ah iyo ka shaqaynta kobaca dhaqaalaha.